शिगा प्रान्त! सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र कुराहरु - Best of Japan
लेक बिवाको क्रूज मिशिगन। ए = जापानको ओहट्सु पोर्टमा शटरस्टकवान्डरफुल प्याडल डु boat्गा।
जापानमा सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गन्तव्यहरू! जाडो, वसन्त, गर्मी, शरद >
कन्साई क्षेत्र! Pre प्रान्तहरूमा गर्नका लागि उत्तम चीजहरू >
शिगा प्रान्त! सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र गर्न चीजहरू
जब तपाईं क्योटोमा यात्रा गर्नुहुन्छ, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछ शिगा प्रान्तमा भ्रमण गर्नुहोस् यदि तपाईंसँग खाली समय छ। सर्वप्रथम, जापानको सबैभन्दा ठूलो ताल, बिवा लेकमा "मिशिगन" डु pleasure्गा लिनु चाखलाग्दो हुनेछ। तालको वरिपरि पुराना मन्दिरहरूको वरिपरि घुम्नु राम्रो विचार हो। यस तालको वरिपरि, मानिसहरूले पुरानो शैलीको दिगो जीविकाको पालन गरिरहेका छन्, त्यसैले यस्तो जीवनशैली अन्वेषण गर्न अद्भुत छ।
Hieizan Enryakuji मन्दिर
टाकाशिमा शहरमा मेटासेक्वाइया रूखहरूको पow्क्ति
शिगा प्रान्त क्योटो प्रान्तको पश्चिम तर्फ अवस्थित छ। तसर्थ, यो प्रान्त लामो समयदेखि क्योटोको साथ विभिन्न ईतिहासहरूको चरणहरू भएको छ। धेरै ऐतिहासिक काठका भवनहरू शिगा प्रान्तको पश्चिमी भागमा छोडियो जुन क्योटोको नजिक छ। यी मध्ये, त्यहाँ दृश्यहरू छन् जुन तपाईं क्योटोमा यात्रा गर्दा अवलोकन योग्य हुनुहुन्छ।
धेरै ऐतिहासिक काठका भवनहरू शिगा प्रान्तको पश्चिमी भागमा छोडियो जुन क्योटोको नजिक छ। यी मध्ये, त्यहाँ दृश्यहरू छन् जुन तपाईं क्योटोमा यात्रा गर्दा अवलोकन योग्य हुनुहुन्छ।
र शिगा प्रान्तको बीचमा झील बिवा हो, करिब २ 235 किलोमिटर परिधि। यो जापानको सबैभन्दा ठूलो ताल हो। तपाईं यहाँ रमाइलो डु boat्गामा चढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रमाईलो डु very्गा धेरै राम्रा छ।
बिवा तालको पूर्वी तट लामो समयदेखि प्रमुख यातायात केन्द्र हो। यस कारणले गर्दा पूर्वी तटमा हिकोन महल भनिने एक शक्तिशाली महल छ। यो किल्ला पनि हेर्न लायकको छ।
बिवा तालको वरपर, मानिसहरूले अझै पनि परम्परागत जीवनशैली लिइरहेका छन्। यो एक दिगो जीवनशैली हो र म यस क्षेत्रका मानिसहरूलाई सम्मान गर्छु।
शिगा प्रान्तमा कुनै विमानस्थल छैन। शिगा प्रान्तको नजिकको एयरपोर्ट ओसाकामा इटामी एयरपोर्ट हो।
किनभने शिगा प्रिफेक्चर क्योटोको छेउमा अवस्थित छ, तपाईं सजिलै JR ट्रेन प्रयोग गरेर पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। क्योटो स्टेशनबाट, यो लगभग १० मिनेट JR ट्रेन बाट शिगा प्रान्तको मध्यमा ओट्सु स्टेशन जान्छ।
यदि तपाईं टोकियोबाट शिगा प्रान्तको पश्चिम तर्फ जानुहुन्छ भने, पहिले शिink्कनसेनद्वारा क्योटो स्टेशन जानुहोस्। अर्को, कृपया क्योटो स्टेशनबाट JR ट्रेन प्रयोग गर्नुहोस्। यदि तपाईं शिगा प्रान्तको पूर्वी क्षेत्रमा जानुभयो भने, तपाईं शिन्कानसेनको माईबारा स्टेशनमा ओर्लनुहुनेछ।
सिफारिश गरिएको भिडियो
Hieizan Enryakuji मन्दिर को पूर्वी टावर, जापान = शटरस्टक
ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल म शिगा प्रान्तको पश्चिम तर्फ सबैभन्दा सिफारिश गर्न चाहन्छु हिजान एनर्याकुजी मन्दिर, यसको माउन्ट टापुको विशाल मैदानहरू सहित। Hieizan (उचाई 848 788 मीटर) एनर्याकुजीको स्थापना साइचोले गरेका थिए, ichoXNUMX मा धेरै प्रसिद्ध पादरी।
यो लगभग सबै माउन्ट भर फैलिएको एक शानदार मन्दिर हो। कियोटो र शिगाको प्रीफेक्चुरल बोर्डरमा अवस्थित हाइजान। यो मन्दिरलाई अक्सर जापानमा "Hieizan" पनि भनिन्छ। हालसालै, वाकायामा प्रान्तको कोयासन पर्यटकहरूको बीचमा लोकप्रिय छ, तर हिजान (एनर्याकुजी) बौद्ध धर्मको पवित्र स्थान हो र कोयासनको छेउमा हेर्न लायकको छ।
Hieizan Enryakuji मन्दिरमा, तपाईं दुबै शिगा पक्ष र क्योटो पक्ष बाट पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ विभिन्न मार्गहरू छन्।
शिगा प्रिफेक्चर साइडमा, यो जेआर हिजान साकामोोटो स्टेशनबाट by मिनेटको बसमा छ। तपाईं केबल कार पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो मन्दिर केबल साकामोटो स्टेशनबाट केबल कार प्रयोग गरी लगभग ११ मिनेटमा छ।
>> Hieiyama Enryakuji को विवरणको लागि, कृपया यो साइटको भ्रमण गर्नुहोस्
ताल लेवामा, "मिशिगन" नामको एक विलासी खुशी डु pleasure्गा संचालित छ। यो खुशी डु .्गामा minutes० मिनेट minutes० मिनेट कोर्सहरू छन्। यो राती अपरेट पनि हुन्छ। यो खुशी डु boat्गा धेरै लोकप्रिय छ।
मिशिगन (787 XNUMX सीट) एक प्याडलहिलर हो जुन अमेरिकाको मिशिगन राज्यको जहाजको छविमा डिजाइन गरिएको हो। शिगा प्रान्त एक संयुक्त राज्य अमेरिका मिशिगन राज्य र एक मैत्री शहर हो कि एक ठूलो ताल पनि छ।
तपाईं ओत्सु पोर्टबाट मिशिगन सवारी गर्न सक्नुहुन्छ। यो जेआर Otsu स्टेशन बाट Otsu पोर्ट गर्न बस बाट लगभग पाँच मिनेट छ।
>> कृपया मिशिगनको विवरणहरूको लागि आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
बिवाको उपत्यका, शिगा प्रान्त, जापान = शटरस्टकबाट ताल बिवा परिदृश्य
फोटोहरू: शिगा प्रान्तमा बिवाको उपत्यका
यदि तपाईं भविष्यमा क्योटो जानुभयो भने, तपाईं क्योटोको पूर्वमा अवस्थित ताल ताल, यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। ताल लेवा जापानको सबैभन्दा ठूलो ताल हो। यस सुन्दर ताललाई हेर्नको लागि उत्तम तरिका भनेको "बिवाको उपत्यका" भ्रमण गर्नु हो। यो एक स्की रिसोर्ट अवस्थित छ ...
तपाइँ तालको वरिपरि पहाडहरूबाट बिवा ताल पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो अवस्थामा, सिफारिश गरिएको स्पटहरू मध्ये एक बाइवाको उपत्यका हो।
बिवाको उपत्यका एक स्की रिसोर्ट हो। जाडो मौसममा, तपाईं कृत्रिम हिउँ मेशिनहरू प्रयोग गरेर स्लिपमा स्नोबोर्डि while गर्दा स्कीइ Bi र स्नोबोर्डिंग गर्दा ताल तालको दृश्यको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
वसन्तदेखि शरद toतु सम्म, तपाईं टेरेसबाट अचम्मका फोटोहरू लिन सक्नुहुनेछ, किनकि तपाईं माथिको फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ।
>> ताल बीवा उपत्यकामा थप जानकारीको लागि, कृपया यो आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्
टाकाशिमा शहरमा मेटासेक्वाइया रूखहरूको पow्क्ति = शटरस्टक
फोटोहरू: तागाशिमा शहर, शिगा प्रान्तमा मेटासेक्वाइया रूखहरूको प .्क्ति
मलाई लाग्छ कि जापानको सब भन्दा सुन्दर रूख-लाइनदार सडक शायद ताकाशिमा शहर, शीगा प्रान्तको मेटासाइकोइया रूख रेखा हो। क्योटो शहरको पूर्वपट्टि अवस्थित छ। १२ मीटर उचाईको met०० मेटासेकियो रूखहरू २.500 किलोमिटरसम्म जारी रहन्छ। शरद पातहरू आश्चर्यजनक छन्। तपाईले यस क्षेत्रमा साइकल भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ। ...
ताकाशिमा शहर क्योटो स्टेशनको 70० किलोमिटर उत्तरपूर्वमा अवस्थित छ। यो जहाँ लगभग met०० मेटासेक्वाइया रूखहरू लगभग २.500 किमि लम्बाइको लागि रोपिन्छ। मेटासेक्विया एकदम अग्लो रूख हो जुन १२ मिटर उचाईसम्म पुग्न सक्छ।
यहाँ तपाईं वसन्त freshतुमा ताजा हरियाली, गर्मीमा गहिरो हरियाली, शरद fतुमा पात झर्ने र जाडोमा हिउँ देख्न सक्नुहुन्छ।
दुर्भाग्यवश, यातायात ज्यादै राम्रो छैन, जेआर मकिनो स्टेशनबाट by मिनेटको बस द्वारा। यो "माकिनो पिकल्याण्ड" बाट छोटो पैदल यात्रा हो।
शिगा प्रीफेक्चर = शटरस्टकमा हिकोन महल
शिगा प्रान्त क्योटोको नजिक भएको हुनाले यसलाई लामो समयदेखि क्योटोको सुरक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइन्छ। हिकोन महल, बिवा तालको पश्चिम तर्फ अवस्थित, टोकुगावा शोगुनेटले १ 17 औं शताब्दीको उत्तरार्धमा निर्माण गरे। यो महल राष्ट्रिय खजानाको रूपमा तोकिएको पाँच महलमध्ये एक हो। महल टावरको माथिल्लो फ्लोरबाट लेक बिवा देख्न सकिन्छ, जुन त्यस समयमा रहन्छ।
फोटोहरू: शिगा प्रान्तमा हिकोन महल
Hikone Castle जापान मा पाँच प्रसिद्ध महलहरु मध्ये एक हो जुन राष्ट्रिय खजानाको रूपमा नियुक्त गरिएको छ। यो क्योटो स्टेशनको लगभग minutes० मिनेट पूर्वमा द्रुत ट्रेन द्वारा अवस्थित छ। किल्ला १ protect औं शताब्दीको उत्तरार्धमा टोकुगावा शोगुनेटले क्योटोको रक्षा गर्न बनेको थियो। यो ...
"कन्साई क्षेत्रको सर्वश्रेष्ठ" फिर्ता
टोटोरी प्रिफेक्चर! सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र गर्न चीजहरू
Shizuoka प्रिफेक्चर: उत्तम आकर्षण र गर्न चीजहरू
मियागी प्रान्त! सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र गर्न चीजहरू
क्योटो प्रीफेक्चर! सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र गर्न चीजहरू
वाकायामा प्रान्त! सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र गर्न चीजहरू
टोकुशिमा प्रिफेक्चर! सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र गर्न चीजहरू
कन्साई क्षेत्र! Pre प्रान्तहरूमा गर्नका लागि उत्तम चीजहरू
Okayama प्रान्त! सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र गर्न चीजहरू
कोची प्रिफेक्चर! सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र गर्न चीजहरू